Horudhac: Paris Saint-Germain vs Bayern Munich… (Kooxda Jarmalka oo doonaysa inay ka soo laabato guuldarradii ka soo gaartay lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League) – Gool FM
Horudhac: Paris Saint-Germain vs Bayern Munich… (Kooxda Jarmalka oo doonaysa inay ka soo laabato guuldarradii ka soo gaartay lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League)
(Munich) 13 Abriil 2021. Kooxda difaacaneysa koobkan ee Bayern Munich ayaa isku diyaarinaysa inay markale ku guuleysato tartankan, iyadoo caawa wajahaysa kooxdii xilli ciyaareedkii hore ay ku garaacday final-ka Champions League ee Paris Saint-Germain.
Naadiga reer Jarmal ayaa booqanaysa PSG lugta labaad ee wareegga siddeed dhammaadka Champions League, waxaana Bayern Munich ay doonaysaa inay ka soo laabato guuldarradii lugta hore ku soo gaartay garoonkeeda Allianz Arena, markaasoo looga soo adkaaday 3-2.
Haddii aynu eegno koox waliba kulankii ugu dambeeyey oo ay soo ciyaartay, PSG ayaa 4-1 ku garaacday Kooxda Strasbourg Sabtidii, halka Bayern Munich ay kaliya dhibic ka soo heshay kulankii ay la yeelatay Union Berlin ciyaar ku soo dhammaatay barbaro 1-1.
Marco Verratti iyo Alessandro Florenzi ayaa labaduba diyaar u ah kooxda tababare Mauricio Pochettino kaddib markii ay ka soo laabteen caabuqa Korona Fayras oo haleelay.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira shaki cusub oo laga qabo Keylor Navas kaddib markii laga saaray ciyaarihii caalamiga ah, inkastoo Macallin Pochettino uu hoos u dhigay cabsida uu qabo inuu xiddigani maqnaado muddo dheer, isla markaana waxa uu qabaa inuu taam u noqon karo inuu ku soo bilowdo safka hore.
Mauro Icardi iyo Layvin Kurzawa ayaa la qiimeyn doonaa xaaladdooda, laakiin Marquinhos iyo Juan Bernat ayaa ka maqnaan doona kulankan.
Waxaa la arki karaa Danilo Pereira oo ka maqnaan kara kooxda martida loo yahay, waxaana ka soo muuqan kara oo safka hore oo ka garab ciyaari kara Idrissa Gueye midkood Leandro Paredes ama Ander Herrera.
Hansi Flick ayaa waxaa ka maqnaan kara ilaa iyo 10 ciyaartooy oo waa weyn kulanka ay safafka ku tagayaan Paris, iyadoo Douglas Costa, Corentin Tolisso, Robert Lewandowski iyo Serge Gnabry la xaqiijiyay inay maqnaan doonaan.
Alphonso Davies si fiican ayaa loo nasiyay kaddib markii uu soo dhammeystay ganaax maxalli ah, waana inuu ku soo bilowdaa daafaca garabka bidix, maadaama Lucas Hernandez uu la dhibtoonayo dhaawac feeraha ah.
Wadnaha daafaca Kooxda Bayern ayaa cabsi badani ka jirtaa, iyadoo Jerome Boateng iyo Nicklas Sule uu shaki ku jiro.
Javi Martinez ayaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo khadka dhexe, iyadoo Marc Roca iyo Leon Goretzka shaki laga qabo, inkastoo Flick laga yaabo inuu Thomas Muller ka garab ciyaarsiiyo Joshua Kimmich, isla markaana uu Jamaal Musiala ku soo daro safkiisa hore.
Kingsley Coman ayaa garoonka laga saaray qeybtii nasashada kulankii Union Berlin, laakiin waxa uu fursad u heli karaa inuu ku soo bilowdo kulankan.
>- Bayern Munich ayaa ku tuurtay 31 shuut PSG lugtii koowaad ee Arbacadii la soo dhaafay, 12 ka mid ahna waxa ay ahaayeen bartilmaameed toos ah.
>- Joshua Kimmich ayaa abuuray 10 fursadood kulankii hore, waana kii ugu badnaa ee siddeed dhammaadka Champions League tan iyo Mesut Özil oo isagoo ka tirsan Real Madrid sidaasi sameeyey kulan ay wajaheen Tottenham Hotspur bishii April 2012-kii.
>- Bayern ayaa 1-0 ku garaacday PSG finalkii tartankan xilli ciyaareedkii hore, iyadoo Coman oo ka soo qalin jabiyay akadeemiyada Paris uu ku guuleystay inuu gool ka dhaliyo PSG iska markaana kooxdiisu ay koobka ku qaaddo Lisbon.
>- Kooxda difaacanaysa Champions League ee Bayern Munich ayaa koobka horyaallada Yurub ku guuleysatay lix jeer, halka PSG heerkoodii ugu fiicnaa uu ahaa inay sanadkii la soo dhaafay gaareen Final-ka tartankan.
>- Bayern Munich ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 18 ka mid ah 20-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen Champions League.
>- PSG ayaa guuleysatay shan ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka Champions League.
Horudhac: Chelsea vs FC Porto... (The Blues oo hal lug la sii gashay afar dhammaadka Champions League oo caawa ku soo ciyaareysa Magaalada Seville)